Al Shabaab oo Askar ka tirsan Maamulka Jubaland ku soo bandhigay Duleedka Kismaayo
Sunday January 01, 2017 - 11:59:40 in Wararka by Super Admin
Xarakada Al Shabaab ayaa Ciidamo ka tirsan kuwa Maamulka Jubaland waxey ku soo bandhigeen Duleedka Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubada Hoose.
Askartan oo gaaraya ilaa 3 Ruux ayaa sida la tilmaamay waxe isku dhiibeen Xoogaga Al Shabaab ee ku sugan Degaano Duleed ka ah Xarunta Gobolka Jubada Hoose.
Saraakiil ka tirsan Al Shabaab ayaa shaaca ka qaaday in ay soo dhaweeyeen Askartan isku soo dhiibay.
3-dan Askari midkood ayaa magaciisa lagu sheegay Cali Axmed Gaaboow, kaasi oo ka mid ilaalada gaarka ee Madaxweynaha Maamulka Jubaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe).
Dhinaca kale, Askartan oo la hadlay warbaahinta ku hadasha Afka Xarakada Al Shabaab ayaa waxey sheegeen in isa soo dhiibidooda ay fududeeyeen Waxgaradka Degaanada Jubbooyinka.
Weli majiro wax hadal ah oo ka soo baxay Saraakiisha Maamulka Jubaland oo ay uga jawaabayaan Ciidamadan lagu soo bandhigay Duleedka Kismaayo.